Itti qophoofnee jirra qeerroon! PPn Bilixiginnaa Diina oromoo ti !! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsItti qophoofnee jirra qeerroon! PPn Bilixiginnaa Diina oromoo ti !!
Itti qophoofnee jirra qeerroon!!!
PP ‘n EZEMA Bilixiginnaa Farra oromoo oromiyaa diiguuf karaa Abiy gaggeeffamaa jiru Tibba dhufu kana salphachuuf jira.Keessumaa Hojjettoota Mootummaa Miseensa Opdo fedhii bu’aa ofiif,jiraachuuf fi Dirqiin miseensa turan ykn Hojjetoota Mootummaa miseensa Hin taane irraa Pp EZEMA Bilxiginnaa mormuun akka saree maraattee itti iyyuun oromiyaa keessatti Bakka hundatti akka dachee oromiyaa irra Hin quphanne itti qophaayaa jiru.
Seektaroota Mootummaa keessaa muraasini…
-Barsiisota sadarkaa hundaa.
-Ogeessota qorannoo qonnaa fi kkf hundi qophiin akka ppn jibba oromoo qabdu Garuu qabeenya oromoo saamuuf waggoota 50 oliif yaalatee galma gahuufii dide karaa Abiy tuffii Saba oromoo tiif qabu fayyadamuun maqaa jijjiiratanii oromiyaa diiguuf nutti dhufaa jiran salphisuun akka saree maraattee itti iyyuun oromiyaa keessaa hariyachuun Guyyaa muraasatu hafa.
PPn Bilixiginnaa Diina oromoo ti !!
PP Ni balaaleffanna !!
PP kaayyoo ilmaan nafxanyootaa Gamtaan dura dhaabbanne Ni fashaleesina !!
Oromiyaa dhiiga keenyaan Ni tiksina !!
Oromiyaan kan oromoo ti malee kan Bilxiginnaa Hin taatu !!
Uummata Amboo shira kaabinoota dullattii Opdo duriin walitti buusuun itti fufeera.
Xiyyeeffannoon isaanii ABO fi KFO jibbisiisuun Opdo jalatti bu’aan uummata addan hiruu dha.
Keesumaa oromoo ilmaan abbaa tokkoo damee maccaa keessaa warri Amboo fi Wallaggaa garaa garummaa Hin qaban.Tooftaa nafaxanyootaa oromoo lagaa fi Amantaan addaan qooduu yeroon irraa darbe ,deebisanii oromoo Amboo fi Wallaggaa jechuun walitti buusuu fi addaan qooduun Opdon maallaqa gudaa ramaduun irratti hojjechaa turan Ammas jiru.Garuu galma Hin geenyeef.Mana buunaa fi Hoteela hunda keessatti holola oromoo lagaan qooduutu Namoota Hubannoo Hin qabnee ,oromoota Saba isaanii bu’aan gurgurachuu baran fi warreen Diina oromoo ta’aniin oromoo lagaan qooduun hololamaa jiraachuun itti fufeera.
Yeroo Ammaa shira kana mallaqa guddaa Finfinnee irraa Amboo diiguuf ramaduun Uummata Amboo Lagaa /waddeessa/qofa ijaaruun fi Amantaan addaan qooduuf torbee torbeen dhoksaan walga’ii taa’aa jiru.Dhalataan waddeessaa Kana booda qabsoo dhaabaatii Opdo/Pp waliin hojjedhaa.Bu’aa barbaaddan Mootummaan isini mijeessa jechaa jiru.Mallaqni kun kan ramadame Securty Federalaa Damalash G/mika’eel fi Artistoonni gara dantaa dhunfaaf Mootummaa waliin hojii calqaban harka keessaa qabu.Akka kaabinoota Opdo durii Amboo tti shira kana maallaqa Mootummaan Uummata Amboo diiguuf ramadeen kan nu burjaajessaa jiran..
1,Guddataa Dinqaa.Securty Godinaa duraanii.
2,saahiluu Dirbisaa.Waajira Opdo Godinaa.
3,Balaay kumalaa.Basaasaa Amboo bara dheeraa ti.
Dhalataa waddeessaa Jiraataa Magaalaa Amboo keessaa..Warri shira xaxaa jiran
2,Birhaanuu Kabbaddaa .
4,Abiyooti Jifaaraa .
6,Keesumaa daldaaltota bu’aan mooksaa jiru.
Ta’us Opdon diigamtee EZEMA ykn Bilixiginnaan dirqiin Bakka buuteetti.
Bilixiginnaa waliin dhaabbachuun oromiyaa keessatti Farda du’een gulufuudha.
Uummanni shira toftaa dulloomaa Tplf /Opdo kana dursee beekuun dura dhaabbachuu qaba.
Qeerroo fi qarreen Amboo Fashaleessuu qabna.